Keylor Navas oo si caro leh kaga hadlay xaalada uu haatan kaga sugan yahay kooxda Real Madrid – Gool FM
Keylor Navas oo si caro leh kaga hadlay xaalada uu haatan kaga sugan yahay kooxda Real Madrid
Dajiye November 30, 2018
(Real Madrid) 30 Nof 2018. Goolhaayaha Real Madrid Keylor Navas ayaa sii xumaaneysa xaalada uu kaga sugan yahay Los Blancos, kadib markiii uu booskiisa kulamada La Liga iyo Champions League uu u lumiyay saxiixa cusub ee kooxda Thibaut Courtois.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Keylor Navas uu ku soo daabacay boggiisa rasmiga ah ee “Twitter-ka” qoraal uu ku muujinayo xaalada uu kaga sugan yahay kooxda Real Madrid.
“Inaad ku guuleysano tartanka Champions League 3 jeer ee isku xigta, hadana aadan qeyb ka noqon kulamada kooxda”.
Ereyadan yar ayaa tilmaamaya sida uu kaga careysan yahay Keylor Navas go’aanka kooxda Real Madrid, maadaama uusan ku lahayn door muuqda tan iyo markii uu Thibaut Courtois kaga soo dhaqaaqay kooxda Chelsea.
Keylor Navas ayaa xili ciyaareedkan ka qeyb galay kulamo yar tartanka Champions League iyo hoyaalka La Liga inta uu kooxda ku sugnaa macalinkii hore ee Julen Lopetegui.
Laakiin tan iyo markii uu shaqada kooxda Real Madrid la wareegay macalinka haatan leyliya ee Santiago Solari, goolhaayaha cusub ee Thibaut Courtois ayaa noqday kan ugu badan ee shabaqa u ilaaliya Los Blancos.
"Waxaan u maleynayaa in abaalmarinta Ballon d'Or ay lumisay qiimahii ay laheyd hadii uusan qeyb ka ahayn Messi” - del Bosque
Kooxda Barcelona oo war rasmi ah kasoo saartay xaalada dhaawaca Samuel Umtiti